jeudi, 19 juillet 2018 20:26
Fitaterana: Ho 500 Ar ny sarandalan'ny taxi-be
Efa mampahafantatra amin'ny petadrindrina ireo mpandeha aminy ireo kaoperativa miisa valo mivondrona ao amin'ny FMA (Fitaterana Mendrika an'Antananarivo) fa dia ho 500 Ariary ny sarandala amin'ny taxi-be manomboka amin'ny 1 aogositra 2018.
Tsy mbola nandrenesam-peo mikasika izany na ny ATT na Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety na ireo fikambanana milaza fa miaro ny zon'ny mpanjifa.
Guy Rider: Tohina mandre ny karaman'ny mpampianatra malagasy
Naneho ny heviny tamin’ny gazety amerikanina iray " New-York Job" momba ny karaman’ny mpampianatra eto Madagasikara, i Guy Ryder, Tale jeneralin’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa nanomboka ny taona 2012. Mahatsiaro ho tohiny ity tomponandraikitra ambony manerantany momba ny asa ity, rehefa nandre sy nahafantatra ny karama raisin’ny mpampianatra Malagasy.
jeudi, 19 juillet 2018 14:19
Fampianarana: Nivoaka ny tetiandro ho an’ny taom-pianarana 2018-2019
Raha tsy mbola fantatra ny ho fiafaran’ity taom-pianarana 2017-2018 ity dia efa namoaka ny tetiandro ho an’ny taom-pianarana 2018-2019 ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena.
Koa hitsinjara roa volana in-dimy izany:
* Hanomboka ny 19 novambra 2018 ny fidiran’ny mpianatra ary hifarana ny 30 aogositra 2019;
* 22 desambra 2018 ka hatramin’ny 6 janoary 2019 ny fialantsasatry ny Krismasy;
* 27 febroary ka hatramin’ny 1 marsa 2019 ny Andron’ny sekoly;
* 20 aprily ka hatramin’ny 28 aprily 2019 ny fialantsasatry ny Paka;
* Mifarana ny 30 aogositra 2019 ny taom-pianarana.
jeudi, 19 juillet 2018 14:12
Governemanta: Mpikambana roa no nanao fanambaram-pananana
Mpikambana roa ao anatin’ny governemanta Ntsay Christian ihany hatreto, iray volana sy herinandro taorian’ny nanendrena azy ireo, no nanao fanambaram-pananana teny amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana dia ny Praiministra lehiben’ny Governamanta, izay nanao izany ny 09 jolay 2018 sy ny minisitry ny tontolo iainana sy ny haivoary ary ny ala, Randriatefiarison Guillaume Venance, nametraka ny azy omaly alarobia 18 jolay.
Ny lalàna 2016–020 tamin’ny 22 aogositra 2016 no manery ny tomponandraiki-panjakana sy olomboafidy tsy maintsy manao fanambaram-pananana izay havaozina isaky ny roa taona, raha havaozina isan-taona izany taloha araka ny lalàna 2004-030 tamin’ny 9 septambra 2004.
jeudi, 19 juillet 2018 14:11
Lusaka-Zambie: Tsy fahalalana sa fanahiniana tsotra izao ?
Nitsongoloka ny Sainam-pirenena napetaka teo amin’ny fiara nitondrana ny Filoha Malagasy Hery Rajaonarimampianina tany Lusaka, renivohitr’i Zambie, izay nampiantrano ny fivoriambe faha-20 ny COMESA. Ny maitso indray no natao ambony, ary ny mena kosa no ambany. Notapahina ka natao roa an-dalana ihany koa ny anarana "MADAGASCAR" napetaka tamin'ilay fiara.
Tsy nahatsikaritra ve sa nanaiky izany tranga izany ny mpiandraikitra ny harofenitra avy amin’ny delegasiona Malagasy, nefa dia mariky ny fiandrianana, ary koa singa maha firenena ny firenena iray ny Sainam-pirenena. Ny Filoha Malagasy rahateo no Filoha mpitarika ny COMESA izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy io fihaonana an-tampony faha-20 ny COMESA io, omaly 18 jolay 2018.
Ny Firenena iray dia manana olona, mpandraharaha sy orin'asa mamokatra, fambolena, fiompiana, jono, fitradrahana harena ambony sy ankibon'ny tany, indostria, taozavatra, asa tanana, services...
Ao ireo vokatra izay izy tompony ihany no manjifa azy. Ao kosa no amidiny eto an-toerana ihany, ary ao ireo vokatra na services amidy any ivelany.
Ireo vokatra sy services amidy any ivelany izany no resahina eto.
Etsy ankilany kosa, dia misy indray ireo vokatra na services tsy vita eto an-toerana, na noho ny vidiny, na ny hatsarany dia hafarantsika avy any ivelany. Na amin'ny alalan'ny mpandraharaha eto an-toerana no mitady entana any, dia mitondra azy amidy aty, na ny mpandraharaha avy any ivelany no mandeha mivarotra aty amintsika ihany koa.